Afar gabdhood oo walaalo ah, hal mar caloosha kasoo baxay, mar qurana wada aqal galaya | Berberanews.com
Home Qubanaha Afar gabdhood oo walaalo ah, hal mar caloosha kasoo baxay, mar qurana...
Afarta gabdhood ee walaalaha ah, oo kasoo jeeda gobolka Kerala ee koonfurta Hindiya, waxay hooyadood dhashay hal maalin, noloshooda oo dhanna waxay kusoo qaateen qaab isku mid ah – iyagoo hal nooc oo raashin ah cunaya, hal nooc oo dhar ahna wada xiranaya – iyo xitaa iyagoo hal kursi uga fariisanayay fasalka iskuulka, ilaa inta ay ka gaarayeen 15 sano.
Hadda dhammaan gabdhahan walaalaha ah waxay aqal galayaan hal maalin.
Iyagoo shan carruur ah ayey mar qura kasoo wada baxeen calooshooda(Qofka shanaad waa wiil walaalkood ah).
Maalintii ay dhalanayeen waxay soo jiiteen indhaha dadweynaha, warbaahinta oo dhan ayaana hadal heysay.
Waa kuwan iyagoo sheekadooda la wadaagaya BBC-da.
Afarta gabdhood ee walaalaha ah, oo kala ah Uthra, Uthraja, Uthara, Uthama iyo walaakood Uthrajan waxay dhasheen 18-kii bishii November ee sanadkii 1995-kii, waxayna doonayaan in ay hal mar wada aqal galaan 26-ka bisha April ee sanadka soo socda.
“Waxa ugu badan ee hadda gurigeenna looga sheekeysto waa arooska. Wali ma aannaan soo gadanin dharka aan ugu talagaleyno maalinteenna weyn. Laakiin waxaan soo iibsan doonnaa hal nooc iyo hal midab oo isku wada mid ah”, ayey tiri Uthara.
Iyadu waa wariye ninka ay mustaqbalka xaaskiisa noqoneysana sidoo kale waa wariye.
Arooskooda wuxuu noqon doonaa mid dhaqameed. Dhaqankoodu wuxuu dhigayaa in xubnaha qoyska ay kaala qeyb qaataan xulashada qofka nolosha kula qeybsanaya. Sidaas darteed hooyadood Rema Devi ayaa ka caawisay gabdhaheeda inay doortaan ragga guursanaya, iyagoo kasoo xulanayay website ay isticmaalaan dadka guurdoonka ah.
Aroosyada noocan oo kale ah waxaa la isku aaddiyaa dadka isku heerka aqooneed ah isku xirfaddana ah. Laakiin ma aha wax la isku khasbo, arooska iyo aroosaddana waxay ku leeyihiin fikirkooda.
Lamaaneyaashan waxay xaladdooda meherka dhacday bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay, laakiin saddex ka mid ah afarta nin uma aysan suurtagalin in aqalgalka arooska la sameeyo, maadaama ay ka shaqeynayeen Bariga Dhexe.
Hadda shanta walaalo waxay isku dayayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen in arooskooda uu mid noqdo.
Gabdhahan wax kasta way isla mareen tan iyo markii ay dhasheen, wayna isgarab taagnaayeen.
Laakiin way tartami jireen, taasina waxay sahashay in mid waliba ay yeelato shakhsiyaddeeda gaarka ah.
Sugitaan farxad leh
“Hooyadeen ayaa jecel in halmaalin aan wada aqal galno. Sidaas darteed, waan go’aansannay inaan isa sugno,” Uthraja ayaa sidaas ku tiri BBC.
In la qorsheeyo aroosyada Hindida waxaa ku baxa kharash badan, qoysas badanna waxay isku mar ka dhigtaan guurka dhalinyarada ilma adeerka ah, si ay u yareeyaan lacagta ka baxeysa.
In si kala gaar gaar ah loo qorsheeyo arooska afarta gabdhood waxay khasaare maaliyadeed ku noqon lahayd hooyadood.
Lahaanshaha sawirkaUTHARAImage captionUthrajan wuxuu sheegay inuusan wali guur qorsheysanin
Marka laga soo tago afarta gabdhood iyo arooskooda, wiilka ay isku mar caloosha iskala soo baxeen ee lagu magacaabo Uthrajan wuxuu sheegay in isagu uusan wali go’aan ka gaarin inuu guursado.
Balse gabdhaha walaalihiis ah waxay ku mashquulsan yihiin qorshaha.
Waalidiintooda farxadda way ka badatay markii ay hal mar dunida kusoo biireen shan carruur ah.
Carruurtan si fiican ayey wax u barteen laakiin walaaca ugu badan wuxuu ka taagnaa caafimaadkooda.
“Waxay dhasheen iyagoo miisaankooda uu aad u hooseeyo, inta badanna way xanuunsan jireen,” ayey tiri Rema Devi, oo dib u xasuusaneysay sida ay carruurteeda kusoo koreen.
Aabahood Prema Kuma iyo hooyadoodba dhibaato adag ayey kasoo mareen inay shan carruur ah hal mar wada koriyaan.
Lahaanshaha sawirkaUTHARAImage captionIn la koriyo shan carruur ah uma sahlaneyn hooyo Rema Devi
Dhaqaale buuran ma aysan heysanin, sidaas awgeed waxay xoogga saareen sidii ay ilmahooda wax barasho fiican u heli lahaayeen.
Meelo badan oo ka mid ah Hindiya aad loogama daneeyo in gabdhaha wax la baro, wiilasha ayaana la aaminsan yahay inay heer fiican gaari karaan.
Laakiin gabdhahan walaalaha ah waxay sheegeen in waalidiintooda ay qof walba xuquuqdiisa siiyeen, midna aysan si gaar ah u gacan bidixeynin.
“Waligeen dhibaato dhexdeenna ma imaanin. Waligeen ma aannaan dhibsanin in midba midda kale ay dharkeeda xirato”, ayey tiri Uthara.
Lahaanshaha sawirkaUTHARAImage captionRema Devi, iyo seygeeda oo dhintay waxay dhibaato kala kulmeen korinta carruurtooda
Laakiin musiibo ayaa qoyska ku dhacday markii ay gabdhaha iyo walaalkood jireen 9 sano oo kaliya.
Aabahood wuxuu lahaa dukaan qalabka waxbarashada lagu iibiyo, halkaasoo uu ka dabari jiray biilka qoyska.
Balse markii ay culeysyo badan oo dhaqaale kasoo wajaheen dhinaca ganacsiga, wuu isdilay sanadkii 2004-tii.
In meel fiican la iska soo saaro
Kaddib markii ay qoyskan waayeen aabahood, oo biilka u soo shaqeyn jiray, warbaahinta ayaa sheekadooda faafisay. Dowladda ayaa soo faragalisay, waxaana Rema Devi shaqo laga siiyay bangi maxalli ah.
“axaan diiradda saaray korinta carruurteyda. Shaqadeyda waxay ku filnaatay kharashka raashinka iyo waxbarashada”.
Lahaanshaha sawirkaUTHARAImage captionGabdhaha aabahood, Prema Kumar, oo ka caawinaya Uthara inay baaskiil waddo
Dhaktar dariskooda ahaa ayaa markii uu arkay xaaladda qoyskan wuxuu siiyay guri ay hoy ka dhigtaan, kaasoo ay aad uga mahad celiyeen.
“Nolosha adag waxay dadka ka dhigtaa kuwo meel fiican iska soo saara”, ayey tiri Rema Devi.
Dhammaan shanta carruurta ahba si fiican ayey wax u barteen waxayna ku qalin jabiyeen culuumta ay kala doorteen.
“Hooyadeen aad bay u faraxsan tahay. Waxay mar walba dooneysay inaan noqonno dad madax banaan”, ayey tiri Uthara.
Qoyskan waa Hindu arooskooduna wuxuu ka dhici doonaa macbad caan ah.
Kaliya xubnaha qoyska ee aadka u dhow iyo saaxiibbada ayaa lagu casuumi doonaa. Wariyeyaasha iyo sawirqaadeyaasha ayaa sidoo kale la filayaa inay halkaas soo buux dhaafiyaan.
“In isha nalagu wada hayo waa barako”, ayey tiri Uthara.
In ay shan carruur ah mar qura wada dhashaan waa arrin dhif ah, sidaas darteedna waxaa dhaqdhaqaaqooda daneynaya warbaahinta.
Maalintii ay dhasheen, maalintii ay iskuulka wada billaabeen iyo maalintii ay dhammeeyeen waxbarashadaba waxaa wada tabiyay warbaahinta maxalliga ah.
Wadajir dhinaca niyadda ah
Gabdhahan walaalaha ah waxay hadda ka fikirayaan sidii ay u caawin lahaayeen hooyadood.
Waxay sidoo kale sheegeen inaysan waligood kala tagi doonin.
“Xitaa markii aan kala aadno meelo kala duwan oo aan ku noolaaneyno, mar walba waxaan isula jiri doonnaa si niyad ah, waana iska fikir
Previous articleXisbiga Waddani oo baaq u diray dadweynaha Somaliland iyo Baarlamaanka
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo ka hadlay midnimadii Somalia Halgankii iyo xorriyadii madaxbannaanida- Muuqaal